Britain: 70 guurada arooskii Boqoradda Elizabeth & Amiir Philip – Kasmo Newspaper
Britain: 70 guurada arooskii Boqoradda Elizabeth & Amiir Philip
Updated - November 19, 2017 10:35 am GMT
London (Kasmo), Boqorad Elizabeth iyo Amiir Philip waxay ku jiraan dabbaaldegga 70 guurada ka soo wareegtay arooskoodii, mana jiro qoys Boqortooyo ah oo muddo sidaas u dheer wada noolaa.
Galabnimada barri oo Isniin ah, 20ka Nofember, qoyska Boqortooyada Britain oo idil, yar iyo weyn, meel qur ah ayay isugu iman doonaan, Qasriga Windsor, sida dhacda marar nadir ah, iyaga iyo tiro yar oo saaxiibbo ah.
Boqoraddu waa 91 jir, Amiirkuna waa 96 jir, waxayna xaflad kooban ku xusi doonaan sannadguuro muhiim ah, waxay ka sheekayn doonaan midba midka kale iyo nolosha mashquulka badan ee marar badan kala fogeysay.
Elizabeth waligeed nolosheeda ma baran mana caashaqin nin kale , laga soo bilaabo markii ay jirtay 13 sano, isaguna ahaa 18 jir laylis sarkaal ah kuna jira Kulliyadda Ciidanka Badda Dortmouth. Waxay isku guursadeen, 8 sano ka dib, 20kii Nofember 1947kii, gudaha Kaniisadda Westminster.
Maalintii ka horreysay, Elizabeth aabaheed, George VI, wuxuu aad uala dardaarmay Philip isaga oo su’aalay in uu garowsanyahay tillaabada uu damacsanyahay in uu qaado, in uu guursanayo gabadhiisa oo noqon doonta Boqorad.
Taas oo u xambaarin doonta mas’uuliyad culus oo abadi ah oo uusan sina uga baxsan doonin, macnaheeduna yahay in uu had iyo jeer 3 tillaabo ka dambeeyo xaaskiisa, mar kasta caawiyo, kana tanaasulo qaar ka mid ah waajibadkiisii saynimo.
Muddo 70 sano ahna sidaa ayuu xaalku ahaaday, 50 guuradoodii, Elizabeth, si khushuuc leh ayay Philip uga hadashay, waxay ku tilmaantay “My strength” ama xooggeygii.
Mana jiro go’aan qur ah oo Boqoraddu qaadato iyada oo aan marka hore odeygeeda kala tashan, ha yeeshee macneheedu ma ahan in ay mar kasta raacdo tilmaamihiisa.
Laakiin iyadu muhiim ayay u ahayd in ay hesho qof ay ula dooddo sidii mid la siman oo kale oo aan ka qabin dareenka ah in uu iyada fikradeheeda u nacamleeyo oo qur ah, sida dadka kale. Isagu waa qofka kaliya ee Boqoradda ula dhaqma sidii axad aadami ah oo kale.
Xiriirkooda dheer wuxuu ka soo badbaaday dagaalkii Dunida, qalalaasihii iyo isbeddelladii faraha badnaa ee dalka ay ka taliyaan, caradii ka dhalatay geeridii Lady Diana, is mari waagii R/Wasaarayaashii Tony Blair iyo Margareth Thatcher, iwm.
Waligood iskuma dhunkan, xitaa dhabanka, meel fagaare ah, gacmaha isma qabsan, mana muujin kalgacayl la arki karo, laakiin noloshooda gaarka ah, 70 sano ayay wali yihiin lammaanaha isugu dhow uguna faraxsan dunida.